बलिउड Archives - Page4of 10 - www.kchhakhabar.com
वकिल बन्दै नायिका प्रियंका
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपडा अब वकिल बन्ने भएकी छन् । उनलाई चलचित्रमा भित्र्याउने निर्देशक सेथ गोर्डनको एक चलचित्रमा उनी वकिल बन्ने भएकी हुन् । प्रियंका हालसम्म कुनै पनि फिल्ममा वकिलको भूमिकामा देखिएकी छैनन् । तर, उनी उक्त चलचित्रकी प्रमुख नायिका भने होइनन् । उक्त फिल्ममा प्रियंकानिकट हलिउड अभिनेत्री मुबिना यार्शटोन्सीको मुख्य अभिनय रहनेछ ।
राम रहीमलाई २० वर्षको सजाय सुनाएपछि, शाहरुखले राेके शूटिङ
एजेन्सी /बलात्कारको अपराधमा डेरा सच्चा सौदा प्रमुर राम रहीमलाई सीबीआईको विशेष अदालतले सोमबार २० वर्षको सजाय सुनाएको छ । बाबाको २० वर्षको सजाय सुनेपछि बलिउडका राजा शाहरुख खानले दिएको प्रतिकृया निकै नै रोचक रहेको छ । जब अदालतमा जज राम रहीमको फैसला सुनाइएको थियो त्यतिबेला शाहरुख खान शूटिङमा व्यस्थ थिए । सेटमा उपस्थित सुत्रको अनुसार बाबाको सजायको समाचार सुन्नेवित्तिकै शाहरुख निकै नै खुशी भएका...
बलिउड अभिनेत्री ईशा गुप्ता हट फाेटाे सुट
एजेन्सी । बलिउडका थुप्रै स्टारहरु आफ्नो निजी विमानमै यात्रा गर्न मन पराउँछन् । सलमान खान, प्रियंका चोपडा, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी ती कलाकार हुन् जो आफ्नो निजी विमान प्रयोग गर्ने गर्छन् । आज हामी तिनै सेलिब्रेटीको आफ्ना विमानसँगको तस्बिर देखाउन जाँदैछौं । यस्ताे छ बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानकाे निजी विमान प्रियंका चोपडा पनि आफ्नो निजी विमानमै यात्रा गर्न मन पराउँछिन् । विशेषगरी मानिसको भिडभाडबा...
मुम्बई। भारती सिंह भारतीय टिभी इण्डट्रिजकी पहिलो स्ट्याडअप कमेडिण्न हुन्। २०१६ मा फोब्र्सले टप १०० कमेडियन्सको लिस्ट जारी गरेको थियो। जसमा भारती ९८ औं स्थानमा रहन सफल भइकी थिइन्। तर, तपाइँलाई थाहा छ ? आज सबैलाई हसाउने भारती कुनै समय आफ्नो मोटोपनका कारण रातभर रुने गर्थिन्। भारतीले भारतीय अनलाइन संचारमाध्यम दैनिक भास्कार डटकमसँग कुरा गर्दै आफ्नो जीवनका धेरै रोचक कुरा बताएकी छन्। ‘म मध्यम वर्गीय प...
दक्षिण भारतीय फिल्मका सुपरस्टार धनुष र काजोल देवगन अभिनित बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘भिआईपी २’ को हिन्दी ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा धनुष र काजोलको टकराब देख्न सकिन्छ । काजोल फिल्ममा भिलेन बनेकी छिन् । ट्रेलरमा फिल्मका हिरो रघुवरनको कहानी देखाइएको छ, जो आफ्नी पत्नी र पितासँग खुशीमय जिन्दगी विताइरहेका हुन्छन् । यस्तैमा रघुवरनको बाटोमा एक नयाँ दुश्मन वसुन्धरा आउँछिन् । वसुन्धराको भूमिक...
यी नायिकाको नाङ्गो भिडियो लिक
साउथ इंडियन फिल्म ‘दंडुपाल्या २’ को एन सीन हालै लिक भएको छ, जसमा नायिका संजना गलरानी नाङ्गो अवतारमा देख्छिन् । पहिले यो सट फिल्मको लागि सुट गरिएको थियो तर पछि सेन्सर बोर्डको आपत्तिपछि यो सीनलाई हटाइदिएको थियो । नायिका संजनाले यो कुनैपनि पब्लिसिटी स्टन्ट हैन । उनले भनिन्, ‘निर्देशक श्रीनिवास राजु अहिले बाहिर छन्, उहाँ फर्केपछि हामी यस बिषयका बारेमा कुरा गर्नेछौँ ।’
कुनै बेला यस्ती थिइन् प्रियंका चोपडा, हेर्नुहोस् ११ तस्विर
काठमाडौं, ३ साउन । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा ३५ बर्ष पुगेकी छन् । १९९२ मा जमदेशपुरमा जन्मिएकी उनी १३ बर्षको उमेरमै पढ्न वोस्टन गएकी थिइन् । तीन बर्षपछि फर्किन र बरेलीको आर्मी आइ स्कुलमा पढिन् । बाल्यकालमा उनी ‘काली’ भनेर जिस्काउने गरिएको थियो । बाल्यकालमा उनी कालिनै थिइन् । मोडलिङ गर्नु अघि उनको लुक्स यस्तो थिएन । उनका पिताले उनलाई उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रलिया पठाउने तयारी गरेका थिए । ...
सलमानले यौन शोषण गरेपछि सबै सम्बन्ध तोडे : ऐश्वर्या
कुनै बेला बलिउडका सबैभन्दा मिलेको जोडी देखिने सलमान र ऐश्वयावीच विगत १० वर्षदेखि पानी बाराबारको अबस्थामा छ । जब म उसँगको सम्बन्धमा थिए सलमानले मलाई शारिरीर भावनान्तमक र खराब आचरणले दुव्र्यवहार गरिरहने भएकाले एक स्वाभीमानी महिलाको हिसाबले मैले उसलाई छाडेको बताइन । भारतीय संचारमाध्यम इण्डियन एक्सप्रेसको एक साक्षतकारमा उनले भनिन् । सलमानले ऐश्वयाको फिल्म कुछ ना कहोको प्रमोसनको बेलामा अभिषेक बच्चनस...
‘दबंग ब्वाई’ सलमान खानले एक दिनमा कति कमाई गर्छन् ? यसको जबाफ दिन उनले बर्षभर अभिनय गर्ने फिल्मको औसत हिसाब निकाल्नु हुन्छ होला । साथै, अतिरिक्त कमाईको स्रोत खोज्नुहुन्छ होला । सलमान खानको कमाईको मूल आधार फिल्म नै हो । उनले अभिनय गरे बापत प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको हिस्सा ठूलो छ । त्यस्तै उनी फिल्म निर्माण पनि गर्छन् । त्यसबाहेक आफ्ना कम्पनी, विज्ञापन आदिबाट सलमानले आर्जन गर्छन् । फ्याट्टै भ...